Madaxweyne Farmaajo oo bilaabay kulamo looga tashanayo Ra’iisulwasaaraha cusub ee Dawladdiisa
Home /Blog/Madaxweyne Farmaajo oo bilaabay kulamo looga tashanayo Ra’iisulwasaaraha cusub ee Dawladdiisa
Saacadihii ugu dambeeyey Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulamo la lahaa Odayaasha Beelaha & Dhinacyada kala duwan, isagoo kala hadlaya arrimaha magacaabida Ra’iisulwasaaraha cusub ee dawladdiisa oo dhawaan lafilayo in uu ku dhawaaqo.
Madaxweye Farmaajo ayaa lasaadalinayaa in uu magacaabo sida ugu dhaqsaha badan Ra’iisulwasaare cusub, kaas oo ay Ilgaar ah ku eegayaan Shacabka Soomaaliyeed.
Beesha H/gidir ayaa noqotay beeshii u horeysay ee bilowday ololaha ugu weyn ee xilkan ay ku raadineyso, waxaana habeen hore kulan ballaaran ku yeesheen Hotel Afrik.
Kulankan ayaa ujeedkiisa ahaa sidii Beesha H/gidir u heli laheyd xilka Ra’iisul Wasaaraha, waxaana la soo jeediyay in Madaxweyne Farmaajo u magacaabo xilkaas shaqsiyaad dhowr ah oo ay ku jiraan qaar ka mid ah Musharaxiintii u tartantay xilka Madaxweynaha.
Sidoo kale Beesha Muddulood ayaa iyana bilowday dadaalka ay ugu jirto xilkan, waxaana xalay kulan ay ku yeesheen Hotelka Global, waxaana kulankaas goob joog ka ahaa, Xildhibaanada labada Gobol, siyaasiyiinta iyo waxgaradka.
Waxaa kaloo wehliya in Beesha Murusade ay iyana qeyb ka tahay ololaha ay ugu jirto xilka Ra’iisul Wasaaraha, waxaana markii u horeysay ay soo bandhigtay damaceeda qof ka soo jeeda uu qabto xilka Ra’iisul Wasaaraha.
Inkastoo Madaxweyne Farmaajo uu leeyahay soo magacaabida xilka Ra’iisul Wasaaraha, 30-ka maalmood ee uga horeeya marka uu xafiiska, la wareego ayaa hadana la filayaa inuu wada tashiyo kala sameeyo dhinacyo kala duwan.
(Dhagayso): Soomaliland Oo Beenisay Heshiiskii Imaaraadka Carabta ee Dekada Ber Bera
Micheal Keating oo Kismaayo Gaaray Muxuu salka kuhayaa safarkiisa ?